Chii chinonzi TLD? Nzvimbo Dzepamusoro Dzinotsanangurwa | Martech Zone
Chii chinonzi TLD? Nzvimbo Dzepamusoro Dzinotsanangurwa
Svondo, November 20, 2016 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Kana iwe ukaongorora chero zita rezita, iyo top-level duraini ndicho chikamu chekupedzisira mushure mechidimbu chekupedzisira. Ndiyo yepamusoro soro mukati mehutongi hwezita rezita. Saka, ye martech.zone, ivo TLD is .com.
Apo webhu yakatanga kutangwa muUnited States, zvaive nyore nyore kuyeuka mazita echizinda. .com zvaireva kuti iwe waive panzvimbo yekambani, .org zvaireva kuti iwe waive pane isingabatsiri saiti, .edu zvaireva kuti iwe waive kuyunivhesiti kana saiti yechikoro, .com zvaireva kuti iwe waive pane network, .mir zvaireva kuti iwe waive pane yekuisa saiti saiti, uye .gov zvaireva kuti iwe waive panzvimbo yehurumende. Mazita echizinda aigona kunyoreswa .com, .net, uye .org pasina kurambidzwa asi mamwe acho aigumira pazvinangwa chaizvo.
TLDs inogamuchirwa uye inotengeswa neICANN:
Iōannes isiri-yeku-purofiti yeruzhinji-inobatsira mubatanidzwa pamwe nevatori vechikamu kubva pasirese vakazvipira kuchengetedza Internet yakachengeteka, yakagadzikana uye isingashande. Inosimudzira makwikwi uye inovandudza mutemo pane yakasarudzika yeInternet zvitupa. Kubudikidza nebasa rayo rekubatanidza reInternational's Naming system, ine zvakakosha pabasa rekuwedzera uye shanduko yeInternet.
Na 2016, 1300 maTLD matsva akaitwa kuti ashandiswe uye, kazhinji, kutengeswa kune veruzhinji Kuona runyorwa rwese, shanyira Root Zone Database, iyo inotsanangudza ese epamusoro-chikamu maseru, kusanganisira gTLDs senge .com, uye nyika-kodhi TLDs senge .uk.
Hezvino zvese zvawakamboda kuziva nezve maTLDs nekutenda Kubata Chokwadi.
Tags: inotongwatldtop level domain
Sei Kusakundikana paSnapchat
Vatengesi vari Kuvandudza Chiitiko uye Kutyaira Revenue neMeseji Mameseji